Duulimaadyada Tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi oo Maanta si Rasmi ah u Bilaawday (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Waxaa maanta markii u horeysay ee in muddo ah magaalada Muqdisho si toos ah uga ambabaxay Diyaaradii ugu horeysay oo si toos ah uga degi doonta Garoonka Diyaaradaha ee Joma Kenyatta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Duulimaadkan tooska ah ayaanan mari dooni Magaalada Wajeer ee dalka Kenya, oo markii hore diyaaradaha Kenya u safra ee Muqdisho ka baxa ay sii mari jireen si loogu baaro halkaasi, balse heshiis ay wada gaareen labada dowladood dhaqangalkiisa ayaa bilaabanaya maanta.
Dadka Soomaaliyeed waxa ay dhibaato xoogan ku qabi jireen Diyaaradaha sii mara Magaalada Wajeer ee sida aadka ah loogu baaro saacado badana halkaasi ku qaata.
Diyaarada East Africa oo saaka ka duushay Garoonka Aadan Cadde ayaa maanta duhurkii si toos ah uga degi doonta Garoonka Diyaaradaha ee Joma Kenyatta.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhaqangalka heshiiska labada dowladood ay wada gaareen iyo in looga gudbay marxaladdii dhibka badnayd ee Wajeer lagu qabay.